Deenmark oo xabsi iyo musaafuris ku xukuntay soomaali gurigiisa laga helay miino | Somaliska
Islamka & Yurub / Siyaasada
Liibaan Axmed Warsame oo ah 25 jir soomaali ah ayaa maanta oo isniin ahi waxaa maxkamad ku taala gobolka Aarhus ee dalkaasi Deenmark ku xukuntay labbo sanno xarig ah iyo dalka oo laga musaafuris sharuudi ku xiran tahay marka uu dhameeysto xukunka.
Ninkan ayaa sanadkii ina dhaafay, waxaa aqalkiisa laga helay bambaano ama miino. Inkastoo aan wiilkan sida wararku sheegayaan aan lala xirriirin kooxaha argagaxisada ah, hadana cadeeymo la horkeenay maxkamadda ayaa waxaa ka mid ah dhiiga DNA iyo farahiisa oo la qaaday lala xirriiriyey miinadda aqalkiisa laga dhex helay.
Qareenka difaacaya wiilkaan soomaaliga ah ayaa sheegay in ay racfaan ka qaadanayaan xukunka lugu diray Liibaan, iyadoona ay sidoo kale jiraan baaritaano DNA ah oo la qaaday, balse aan boolisku adeegsan oo bambaanadaasi lala xirriirinayo. Waa markii ugu horeeysay oo ruux soomaali ah dembi noocaan ah maxkamad loo soo taago.
Doorashada Sweden & Danaha Soomaalida: Xisbiga Centerpartiet